नयाँ वर्षको अठोट- कोपिला - कान्तिपुर समाचार
नयाँ वर्षको अठोट
काठमाडौँ — मत अब सुतेर एक वर्षपछि मात्र उठ्छु  । बीचमा कसैले नबोलाउनू है १’‘एक वर्षसम्म बीचमा उठ्दै नउठ्ने ?’‘अँ त १’‘अनि भोक, तिर्खा, दिसा, पिसाब, दिग्दारी, क्यै लाग्दैन त्यतिन्जेल ? निद्रै मात्रै लागिरन्छ ?’‘म ती सब पचाइदिन्छु  ।
‘अनि म कोसँग खेल्नु नि त्यतिन्जेल ?’
‘नखेल्नु नि त त्यसो भए १’
बेलुका खाना खाइसकेपछि दाइ सरोज र भाइ निरोजबीच यस्तो गफ हुँदै थियो । सरोजले आफू एक वर्ष सुतिरहने कुरा गजबसँग बताए । भाइलाई सुरुमा यो कुरा अनौठो लाग्यो । उनलाई बिस्तारै चिन्ता लाग्न थाल्यो । एक वर्षसम्म दाजुबाट टाढा हुनुपर्ने कुराले पीर पार्‍यो । उनले रुन्चेशैलीमा आमालाई बोलाए । आमा अझै भान्साकोठामै हुनुहुन्थ्यो ।
‘पख है बाबु, म एकैछिनमा आउँछु,’ उताबाट आमाले भन्नुभयो ।
भान्साबाट आमा आइनपुगुन्जेल सरोजले यस्तै अनौठा कुरा गरेर भाइलाई बिलखबन्दमा पारिरहे ।
आमा भान्साबाट आउँदा निरोज अँध्यारो अनुहार पारेर बसेका थिए । सरोज भने भाइको मुख हेर्दै मुसुमुसु हाँसिरहेका थिए ।
‘सुत्ने बेलामा फेरि के गरेर भाइलाई रुवाएको ?’ आमाले सरोजलाई अलि हपार्नुभयो ।
निरोजले दाजुले भनेका सबै कुरा र आफ्नो गनासो सुनाए । आमालाई पोल लगाइसक्दा उनका गालाबाट आँसुका डल्ला पुर्लुकपुर्लुक लड्न थालेका थिए ।
सरोजले हासेरै जवाफ फर्कायो, ‘भोलि अर्कै वर्ष होइन त १ अनि आज सुतेर भोलि उठ्ता एक वर्ष सुतेको भयो कि भएन ?’
सरोजको उटपट्याङ्ग कुरा सुनेर आमा हाँस्नुभयो । सानो भाइलाई नानाथरी कुरा गरेर रुवाएको भन्दै रिसाएजस्तो गर्नुभयो ।
आमा र दाजुको कुरा सुनेर निरोज रुन छाडिसकेका थिए ।
उनले सोधे, ‘आमा, भोलि के हो ?’
‘भोलि वैशाख १ गते, नयाँ वर्ष । वैशाखदेखि अर्को वर्ष सुरु हुन्छ नि त १ तिम्रो दाजुको उटपट्याङ्ग कुरा तिमी बुझ्दैनौ । त्यसै रुन्छौ मात्र,’ आमाले बोलीमा माया घोलेर निरोजलाई सम्झाउनुभयो । यसो भन्दै गर्दा उहाँ निरोजका आँसु पुछिदिँदै र कपाल मुसार्दैर् हुनुहुन्थ्यो ।
‘नयाँ वर्षमा के गर्नुपर्छ आमा ?’ निरोजले आमाका काखमा बसेर लाडिँदै सोधे ।
‘नयाँ वर्षमा राम्रो र नयाँ काम गर्नुपर्छ बाबु । यो त विद्यार्थी, किसान, जागिरे, कलाकार, व्यापारी सबैका लागि खुसी साट्ने, नयाँ अठोट गर्ने, रमाउने अवसर पो हो त १ आफ्नो सानो, प्यारो भाइलाई केके भनेर, उल्याएर रुवाउने बेला होइन,’ आमाले भन्नुभयो ।
सरोजले सोधे, ‘अनि ती सबैचाहिँ एकैचोटि कसरी खुसी हुन्छन् आमा ?’ यति बेलासम्म उनी गम्भीर बनिसकेका थिए ।
दुवै छोरालाई एकैसाथ राखेर आमाले बेलिबिस्तार लगाउन थाल्नुभयो, ‘हेर त १ तिमीहरूको अन्तिम परीक्षाको रिजल्ट आयो । यो तिमीहरूको नयाँ जोस जाँगर लिएर नयाँ कक्षामा पढ्न जाने बेला हो । वर्षात्को सुरुवात र पालुवा पलाउन सुरु हुने समय भएकाले किसानले पनि यसै बेलादेखि नयाँ वाली लगाउने काम र योजनाको सुरुवात गर्छन् । व्यापारीले व्यापारका नयाँ तरिका अपनाउने, गत वर्षभन्दा धेरै प्रगति गर्ने योजना बनाउने र त्यसैअनुसार अगाडि बढ्ने काम यसै बेलादेखि गर्छन् । यस्ता अवसरमा मान्छेले मनोरञ्जन पनि खोज्छन् । यसमा कलाकारले कला देखाएर कमाउने अवसर पाउँछन् । भन त सरोज अब सबै खुसी भए कि भएनन् ?’
आमाले भन्दै जानुभयो, ‘नयाँ वर्ष सुरु हुने दिन विभिन्न मान्छेले विभिन्न तरिकाले र
माइलो गर्छन् । कोही धार्मिक र रमणीय ठाउँमा घुम्न जान्छन् । कोही नाचगान गरेर रमाइलो गर्छन् । कोही मीठोमसिनो बनाएर खान्छन् । कोहीचाहिँ अबदेखि यो काम गर्छु या गर्दिनँ भनेर अठोट लिन्छन् । कतैकतै नयाँ वर्षको अवसर पारेर मेला र जात्रा आयोजना पनि गरिएको हुन्छ ।’
आमाको कुरा सुनेपछि सरोजले भने, ‘आमा, नयाँ वर्ष त यति ठूलो कुरा रहेछ १ हामी पनि केही रमाइलो गरेर मनाऔं न है १’
‘के गरेर मनाउने त ?’ आमाको सोध्नुभयो ।
‘त्यो त तपाईंले नै भन्नुपर्छ,’ उनले योजना बनाउने जिम्मा आमालाई दिए ।
‘मैले त तिमीहरूका लागि योजना बनाएकै छु तर तिमीहरू मान्छौ भने मात्र म भन्छु,’ आमाले सर्तसहितको प्रस्ताव राख्नुभयो । प्रस्तावमा दुवैले सहमति जनाए ।
त्यसपछि आमाले भन्नुभयो, ‘मेरो योजना तिमीहरू एकछिन रमाउने र त्यसपछि चुप लाग्नेखालको छैन । यो त जति दिन बित्दै गए उति आफ्ना पुराना दिनलाई ऐनाजस्तै हेर्न मिल्ने अवसर दिलाउनेछ । तिमीहरू मान्छौ ?’
भर्खर स्कुल जान र अक्षर चिन्न थालेका निरोजका लागि आमाका कुरा सजिलै बुझ्न सम्भव थिएन । चार कक्षामा पुगेका सरोज पनि वाल्ल परे ।
त्यसपछि आमाले उनीहरूले स्कुल जाँदा बोक्नेभन्दा ठूला, राम्रा र बलियो गाता भएका दुइटा ठूला कापी (डायरी) निकाल्नुभयो र दुवै जनालाई दिनुभयो । उहाँले सरोजलाई भन्नुभयो, ‘अहिले तिमीले दिनभरमा जे काम गर्‍यौ वा अनुभव गर्‍यौ त्यही कुरा यसमा छोटोमा लेख्ने गर । यो काम प्रत्येक दिन गर । भाइलाई पनि तिमीले जानेअनुसार सिकाऊ । पछि तिमीहरू आफैं जान्ने हुनेछौ र यसको महत्त्व बुझ्ने छौ । यो तिमीहरूले यस नयाँ वर्षदेखि लिने अठोट हो ।’
आमाको योजना दुवैलाई अनौठो तर राम्रो लाग्यो । त्योभन्दा राम्रो त उनीहरूलाई आमाले दिनुभएको नयाँ डायरी नै लाग्यो । उनीहरूले त्यो रात सुत्न जाँदा पनि डायरी सँगै लिएरै गए ।
प्रकाशित : वैशाख १, २०७६ १२:३१
ह्याप्पी न्यु इयर
काठमाडौँ — आजबाट नयाँ वर्ष २०७६ सुरु भएको छ  । नयाँ वर्षको पहिलो दिन हामीहरू सबैलाई रमाइलो लाग्छ, किनभने यो दिन आफ्ना परिवारका साथ नयाँ–नयाँ ठाउँ घुमेर, मीठा–मीठा खानेकुरा खाएर रमाइलो गरिन्छ  ।
परीक्षा सकेर रिजल्टसमेत आइसकेको र स्कुल पनि बिदा हुने यो बेला अझ बढी रमाइलो गर्ने मौका हुन्छ । नयाँ वर्षका दिन हामी नयाँ योजना, नयाँ सोच बनाउँछौं ।
संसारभर नयाँ वर्ष रमाइलोसँग मनाइन्छ । नेपालमा विक्रम सम्वत्को पहिलो महिना वैशाखको पहिलो दिन नयाँ वर्ष मनाइन्छ । यो प्राचीन हिन्दु परम्परा र वैदिक समयांकनमा आधारित सौर्यपाक्रो हो । राजा वित्रमादित्यले सुरु गरेको मानिएको विक्रम सम्वत् नेपालमा आधिकारिक रूपमा चन्द्रशमशेरले सुरु गरेका हुन् । यो दिन सरकारले बिदा दिने गरेको छ । अंग्रेजी पात्रो (ग्रेगोरियन पात्रो) अनुसार जनवरी १ का दिन नयाँ वर्ष मनाउने क्रम पनि नेपालमा विस्तारै बढ्दै छ ।
तर नेपालको राष्ट्रिय नयाँ वर्ष भनेको वैशाख १ नै हो । यी २ दिनबाहेक नेपालका विभिन्न जाति, समुदायले पनि आआफ्नै तरिकाले नयाँ वर्ष मनाउँछन् । नेवारी समुदायमा नेपाल सम्वत् प्रचलनमा छ । यो समुदायले कात्तिक शुक्लपक्षको दिनलाई ‘न्हुदँ’ अर्थात् नयाँ वर्षको रूपमा मनाउँछन् । तामाङ, शेर्पा, गुरुङ, थकाली समुदायले ल्होसारलाई नयाँ वर्षका रूपमा मनाउँछन् । थारू समुदायले माघ १ मा नयाँ वर्षका रूपमा माघी पर्व मनाउँछन् । नेपालमा मात्रै नभई विश्वभर नयाँ वर्ष मनाउने आ–आफ्नै चलन हुन्छ । हामीले नयाँ वर्ष मनाइरहेको समयमा अरू केही देशमा पनि नयाँ वर्ष मनाउने चलन छ ।
कुन देशमा कसरी मनाइन्छ ?
बंगलादेशमा अप्रिल १४ का दिन (यस वर्ष वैशाख १ मै परेको छ) नयाँ वर्ष मनाइन्छ । नयाँ वर्षको दिनलाई उनीहरू ‘पोहेला वैशाख’ भन्छन् ।
श्रीलंकाका सिंहाला समुदायले नयाँ वर्षलाई ‘अलुथ अवुरुद्ध’ भन्छन्, जुन अप्रिल १३ या १४ मा मनाइन्छ । यस दिनलाई उनीहरू परिवारका सदस्य सँगै बसेर खाने, साथीभाइ, आफन्त भेटघाट गर्ने, प्रार्थना गर्ने, विभिन्न खेल खेल्ने गर्छन् । श्रीलंकाकै तमिल समुदायले पनि अप्रिल १३ या १४ लाई नयाँ वर्षको रूपमा मनाउँछन् ।
भारतका राज्यहरू असम, पश्चिम बंगाल, उडिसा, पञ्जाब, तेलंगाना, आन्ध्रप्रदेश, त्रिपुरा र तमिलनाडुमा हिन्दु पात्रोअनुसार सूर्य मेष राशिमा प्रवेश गरेपछि नयाँ वर्ष मनाइन्छ, जुन अप्रिल १४ या १५ मा पर्छ । भारतका माडवारी र गुजराती समुदायले दिवाली (तिहारको लक्ष्मीपूजा) लाई नयाँ वर्षका रूपमा मनाउँछन् । असममा नयाँ वर्षको दिन पशुलाई पूजा गरिन्छ । पञ्जाबमा झाँगड नृत्य आयोजना गर्नुका साथै गणेश र लक्ष्मीको पूजा गरी सामूहिक रूपमा नाचगान गरिन्छ । राजस्थानमा पनि नयाँ वर्षको अवसरमा मीठामीठा परिकार खाएर रमाइलो गरिन्छ ।
चीनसहितका केही पूर्वी एसियाली मुलुकमा चिनियाँ नयाँ वर्ष मनाइन्छ । नयाँ वर्षको बिदा जनवरी २० देखि फेब्रुअरी २० को बीचमा पर्छ । बिदामा परिवारसँग बसेर मीठा–मीठा खानेकुरा खाइन्छ । यी मुलुकमा रातो चीज भाग्यको प्रतीक मानिन्छ । चीनमा मन्दिर तथा गुम्बामा भएका बुद्ध मूर्तिलाई हिमालको शुद्ध पानीले नुहाइदिने चलन छ । चिनियाँहरू खुसी र समृद्धिको प्रतीकका रूपमा घरको ढोकालाई रातो रंगले पोत्छन् । रातो बत्ती उडाउँछन् । घरका सदस्यलाई हतियारले चोट नलागोस् भनेर चक्कु लुकाउने गर्छन् । उनीहरू चोट लाग्दा सबै परिवारको भाग्य गुम्ने विश्वास गर्छन् ।
भियतनाममा नयाँ वर्षलाई टेट भनिन्छ । यो भियतनामकै सबैभन्दा ठूलो पर्व मानिन्छ । म्यान्मारमा थिङग्यान भनिन्छ । नयाँ वर्ष अप्रिल १३ देखि १६ सम्म ४ या ५ दिनसम्म मनाइन्छ । यस बेला एकअर्कालाई पानी छ्याप्ने खेल खेलिन्छ । यसो गर्दा आत्माशुद्धि हुने विश्वास गरिन्छ । कम्बोडियाको नयाँ वर्षलाई चुल नाम मे भनिन्छ । यो अप्रिल १३ देखि १५ को बीचमा पर्छ । थाइल्यान्डमा नयाँ वर्षलाई सोङक्रान भनिन्छ । यो पनि अप्रिल १२ या १४ मा पर्छ । यस दिन थाईहरू एकअर्कालाई पानी छ्याप्छन्, जुन भगवान् गौतम बुद्धको आशिर्वादका रूपमा लिइन्छ । मंगोलियामा रातभर जाग्राम रहेर आमाबाबु तथा मान्यजनबाट आशिर्वाद लिई मीठा परिकार खाएर रम्ने चलन छ ।
पश्चिमी अस्ट्रेलियाका मुराडोर नामक आदिवासी समुदायले अक्टोबर ३० का दिन नयाँ वर्ष मनाउँछन् ।
उत्तरी इराक तथा उत्तरपूर्वी सिरिया, दक्षिण–पश्चिम टर्की र उत्तर–पूर्वी इरानमा ‘खाब निसान’ नामले अप्रिल १ का दिन नयाँ वर्ष मनाइन्छ । उनीहरू प्रकृतिको पुनर्जन्मका रूपमा नयाँ वर्ष मनाउँछन् । उनीहरू पार्टी, परेड गर्छन् र पारम्पारिक एसिरियन कपडा लगाउँछन् । इरानको नयाँ वर्ष मार्च २० या २१ मा पर्छ, जसलाई नोरुज भनिन्छ ।
इन्डोनेसियामा मार्चको अन्त्यतिर ‘नेपी’ नामले नयाँ वर्ष मनाइन्छ । यस दिन मानिस नयाँनयाँ लुगा लगाउँछन् । मीठा–मीठा खानेकुरा खाएर आपसमा बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्छन् ।
जापानीले जनवरी १ लाई शोगात्सु नामले मनाउँछन् । यस दिन देशभरका बुद्ध मन्दिरमा १०८ पटक घण्टी बजाइन्छ, जसबाट विगतमा गरिएका पाप पखालिने विश्वास उनीहरू गर्छन् । विश्वभरका समुदायको परम्परागत रूपमा आआफ्नै नयाँ वर्ष मनाउने चलन भएपछि आजकाल हरेक मुलुकमा जनवरी १ लाई नयाँ वर्ष मनाउने क्रम बढ्दै गएको छ । बेलायत, अमेरिका, फ्रान्सजस्ता देशमा नयाँ वर्ष लागेदेखि नै पटाका पड्काउने, आतिसबाजी गर्ने, घुम्ने, रमाइलो गर्ने, मीठा मीठा खानेकुरा खाएर रमाइलो गरिन्छ ।
दक्षिण कोरियामा नयाँ वर्षको पहिलो
दिनलाई चुसेओक भनिन्छ, जुन कोरियाको ठूलो पर्व मानिन्छ ।
अफ्रिकी मुलुक इथियोपियामा सेप्टेम्बर ११ मा नयाँ वर्ष मनाइन्छ । यसलाई
‘इन्कुटाटास’ भनिन्छ ।
विश्वभरका मुस्लिम समुदायले सेप्टेम्बर २२ लाई नयाँ वर्ष मान्छन्, यसलाई हिजरी भनिन्छ । उनीहरूले नयाँ वर्षमा कुनै न कुनै वाचा गर्छन् ।
नयाँ वर्ष मनाउने अचम्मका तरिका
इटालीमा झ्यालबाट पुरानो फलाम र कुर्सी
फाल्ने चलन छ । यस्तै, सेन्ट मार्क्स स्क्वायरमा
जम्मा भई सामूहिक रूपमा चुम्बन गरिन्छ र धेरै
पटाका पड्काइन्छ ।
पनामामा सकेसम्म ठूलो आवाज निकालेर हल्ला गर्ने चलन छ । यसो गर्न उनीहरू कारका हर्न बजाउँछन्, सिठ्ठी फुक्छन् र चिच्याउँछन् ।
इक्वेडरमा अन्डरवेयरमा महत्त्वपूर्ण कुरा टाँस्ने गरिन्छ, यसो गर्दा माया र पैसा आउने विश्वास उनीहरू गर्छन् ।
बुल्गेरियामा नयाँ वर्षको पहिलो दिनको पहिलो मिनेटमा बत्ती निभाउने चलन छ । यो समयलाई चुम्बन गर्ने समय मानिन्छ ।
मेसेडोनियामा घरमा बनाइएको पिज्जा खाने चलन छ । उक्त पिज्जाभित्र सिक्का राखिन्छ, जसले सिक्का पाउँछ, त्यो भाग्यमानी मानिन्छ ।
रूसीहरूले आफ्नो इच्छालाई कागजमा लेखेर बाल्छन् र त्यसलाई स्याम्पेनको गिलासमा राखेर नयाँ वर्ष सुरु नहुँदै पिउनुपर्ने मान्यता छ ।
ग्रिसमा नयाँ वर्षको अघिल्लो दिन लसुनलाई घरको ढोकाअगाडि झुन्ड्याउने चलन छ, यसलाई आउँदो वर्षको पुनर्जन्मको रूपमा लिइन्छ र बाबुआमाले भोलिपल्ट आफ्ना छोराछोरीलाई टाउकामा लसुन बाँधेर उठाउँछन् ।
रोमानियामा नयाँ वर्षको अघिल्लो दिन जनावरसँग कुरा गर्ने चलन छ । यदि कुरा गर्न सफल भयो भन्ने लागेमा अर्को वर्ष त्यो मानिस भाग्यमानी हुने विश्वास गरिन्छ ।
टर्कीमा १२ बजेको घण्टी बज्नेबित्तिकै घरको ढोका खोलेर नुन छरिन्छ, यसो गर्दा घर र व्यवसायमा शान्ति र समृद्धि आउने विश्वास छ ।
डेनमार्कमा नयाँ वर्षका दिन छिमेकीको ढोकाअगाडि प्लेट फुटाउने गरिन्छ । जति बढी प्लेट फुटायो, नयाँ वर्षमा उति बढी भाग्य आउने विश्वास गरिन्छ ।
संयुक्त अधिराज्य र अन्य अंग्रेजी बोलिने देशमा मानिस एकआपसमा हात समाई गोलो भई स्कटिस कवि रबर्ट बर्न्सले लेखेको कविता ‘अल्ड ल्याङ सिन’ गाउँछन् ।
ब्राजिलमा हरेक नयाँ वर्षमा हजारौं ब्राजिलियन समुद्रमा सेतो फूल फ्याँक्छन्, जुन समुद्रदेवीलाई चढाएको मानिन्छ । समुद्रदेवीले आफ्ना इच्छालाई पूरा गर्ने विश्वास गर्छन् ।
जर्मनीमा नयाँ वर्षको दिन पानीले भरिएको धातुको भाँडामा सिक्का खसाएर त्यसको आकृतिलाई नियालेर भविष्यवाणी गर्ने चलन छ ।
प्रकाशित : वैशाख १, २०७६ १२:३०
सुविना श्रेष्ठ जेष्ठ ३१, २०७६
मजदुर दिवसको रात । आफ्नी स्कुले साथीको मृत्युको दुःखद खबरसँगै ब्युँझिएँ म । स्मितालाई मैले उनको मृत्यु हुनुभन्दा केही दिनअघि मात्र काठमाडौँको एउटा रेस्टुरेन्टमा भेटेकी थिएँ । हाम्रो...
जगदीश पराजुली जेष्ठ ३१, २०७६
विश्वप्रसिद्ध जर्नल ‘साइन्स’मा सन् १९६८ मा प्रकाशित ‘ट्राजेडी अफ कमन्स’ धेरै उद्धृत हुने लेखमध्ये पर्छ । गुगल स्कलरका अनुसार, यो लामो लेख करिब ४० हजार प्राज्ञिक...
कृषि विश्वविद्यालयको जग्गामा क्रिकेट रंगशाला
हीराकाजी मानन्धर जेष्ठ ३१, २०७६
धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला बनाउने घोषणा गरे लगत्तै प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच हानथाप सुरु भयो । रूपन्देह, सैनामैना नगरपालिका र चितवन, भरतपुर महानगरपालिकाले जग्गा दिन र आवश्यक...
सम्पादकीय जेष्ठ ३०, २०७६
हामीले अहिलेसम्म देशमा तेल कुवा खनेका छैनौं, बहुमूल्य धातु भेट्टाएका छैनौं । प्रकृतिले मूल्यवान जडिबुटी यार्चागुम्बु दिएको छ, त्यो पनि व्यवस्थित रूपमा टिप्न सकेका छैनौं । संकलकहरूको...